Zvemutemo Ziviso Uye Mamiriro Ekushandisa ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Yako data uye yako zvakavanzika ndizvo zvakakosha zvakanyanya pane ino webhusaiti uye ndosaka ndichikurudzira kuti iwe uverengewo Yakavanzika Policy.
• Kambani zita iri: Online SL
Mukushandiswa kwevateveri vewebhu.online iyo Mushandisi anotora kusaita chero maitiro ayo anogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero yevateveri.online kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kudzima kana kuremedza vateveri vewebhu. paInternet kana izvo zvaizodzivirira, munzira ipi neipi, kushandiswa kwakajairika kwewebhu.
vateveri.online inotora zvine chikonzero chakaringanira chengetedzo kuti uone kuvapo kwehutachiona. Nekudaro, mushandisi anofanira kuziva kuti matanho ekuchengetedza emakomputa ari paInternet haana kuvimbika zvakakwana uye kuti, saka, vateveri.online haigoni kuvimbisa kusavapo kwehutachiona kana zvimwe zvinhu izvo zvinogona kukonzeresa kuchinjika mumakomputa system. (software nesoftware) yoMushandisi kana mune zvinyorwa zvavo zvemagetsi nemafaira arimo.
• Chengetedza, shambadzira uye / kana kuendesa data, zvinyorwa, mifananidzo, mafaera, maratidziro, software kana zvimwe zvinopesana zvinoenderana nemutemo unoshanda, kana kuti zvinoenderana nefungidziro yevateveri. inonyangadza, inosemesa, rusaruraganda, isingabvumirwe kana kusiri pamutemo kana inogona kukonzera kukuvara kwemhando ipi neipi, kunyanya zvinonyadzisira.
Sewe mushandisi, iwe unoudzwa kuti kupinda kune ino webhusaiti hazvireve, munzira ipi neipi, kutanga kwehukama hwekutengeserana ne Online SL nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa webhusaiti, masevhisi ayo nezviri mukati pasina kutyora mutemo. ikozvino, kutendeka kwakanaka uye kurongeka kwevanhu. Iko kushandiswa kwewebhusaiti yezvinangwa zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza, kana izvo, neimwe nzira, zvinogona kukuvadza kana kukanganisa kushanda kwese kwewebhu kunorambidzwa
Pamhepo SL inovimbisa kuvanzika kwe data rako rakapihwa nevashandisi uye kurapwa kwavo zvinoenderana nemutemo uripo parizvino kuchengetedzwa kwe data rako, uchitora zviri pamutemo kuchengetedzwa mazinga ekudzivirirwa kwemunhu data.
Online SL inoitisa kushandisa iyo data inosanganisirwa mufaira re "Vashandisi veWEBHSITI NESUBSCRIBERS", kuremekedza kuvanzika kwayo uye kuishandisa maererano nechinangwa chayo, pamwe nekutevedzera chisungo chayo kuvaponesa uye kugadzirisa matanho ese Kuti udzivise shanduko, kurasikirwa, kurapwa kana kuwana zvisiri pamutemo, zvinoenderana nezvakapihwa neRoyal Decree 1720/2007 yaZvita 21, iyo inobvumidza Mitemo yekusimudzirwa kweOrganic Law 15/1999 yaZvita 13, Kudzivirirwa kweDunhu Dunhu.
Ino webhusaiti inoshandisa masystem akasiyana ekutora ruzivo rwevanhu rwunotsanangurwa muPolisi Yakavanzika uye panoshandiswa zvinangwa nezvinangwa. Iyi webhusaiti inogara ichida mvumo yekutanga yevashandisi kugadzirisa yavo yega data kune zvinangwa zvinoratidzwa.
Mushandisi anogona kurovedza muviri, zvine chekuita nedatha yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Kuti ushandise kodzero idzi, mushandisi anofanira kunyora uye kusaina chikumbiro chavanogona kutumira, pamwe nekopikopi yeID yavo kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yeInternet SL kana neemail, yakanamatira kopi yeID ku: info (at) vateveri.nline. Pamberi pemazuva gumi, chikumbiro chichapindurwa kuratidza kusimbiswa kwekodzero yawakakumbira kushandisa.
Online SL inozivisa kuti kune mafomu ekunyunyuta anowanikwa kune vashandisi nevatengi.
Mushandisi anogona kuita zvinokumbira kukumbira bepa ravo rekunyorera kana kutumira email kune info (pa) vateveri.kutaura kunoratidza zita rako uye surname, sevhisi kana chigadzirwa chakatengwa uye kutaura zvikonzero zvezvaunoreva.
Iwe unogona zvakare kunongedza chikumbiro chako nepositi tsamba ku: Online SL, uchishandisa, kana uchida, fomu inotevera yekudai:
Zve kutariswa kwe: Online SL
E-mail: info (pa) vateveri.online
Kubudikidza neaya Mamiriro Ezvinhu, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zveindasitiri zvinopihwa pamusoro pevateveri vewebhu.online vane zvivakwa zvepaInternet SL, kubereka, shanduko, kugovera, kutaurirana neruzhinji, kuita kuti zviwanikwe kuruzhinji, kuburitsa kunorambidzwa zvakajeka , kushandisazve, kuendesa mberi kana kushandiswa kwechero hunhu, nenzira dzese kana maitiro, ehumwe hwazvo, kunze kwekunge pazvinotenderwa zviri pamutemo kana kupihwa mvumo nemubati wekodzero dzinoenderana.
Muchiitiko chekuti mushandisi kana wechitatu anofunga kuti kwave nekutyorwa kwekodzero dzavo dzepamutemo dzehungwaru nekuda kwekuunzwa kwezvimwe zvirimo paWebhu, vanofanirwa kuzivisa Online SL nezveichi chiitiko chinoratidza:
Online SL inodzora chero mutoro maererano neruzivo rwunowanikwa kunze kwewebhusaiti, nekuti basa rezvisungo zvinowoneka ndezvekuzivisa Mushandisi nezve kuvapo kwemamwe manyuko eruzivo pane yakatarwa nyaya. Online SL inoregererwa kubva kune wese mutoro wekushanda chaiko kwekubatana kwakadai, mhedzisiro inowanikwa kuburikidza nezvakataurwa zvinongedzo, huchokwadi uye hunhu hwezvakanyorwa kana ruzivo runogona kuwanikwa, pamwe nekukuvara uko Mushandisi angatambura nekuda kweruzivo rwakawanikwa pawebhusaiti yakabatana.
Online SL haipe chero vimbiso uye haina basa, mune chero zvodii, zvekukuvara kwemhando ipi neipi inogona kukonzerwa ne:
Kazhinji, hukama pakati pevateveri online neVashandisi vevashandi veterevhizheni, varipo pane ino webhusaiti, vari pasi pemitemo yeSpanish nemasimba uye kuMatare eGranada.
Muchiitiko icho cheroMushandisi ane chero mibvunzo nezve chino ziviso chepamutemo kana chero mhinduro pawebhu vateveri.online iwe unogona kubata info (pa) vateveri.online
vateveri.online inochengetera kodzero yekushandura, chero nguva uye pasina chiziviso chepamberi, kuratidzwa uye kurongeka kwewebhu vateveri.online seino ziviso yepamutemo.